Sarkaal Shabaab iyo ilaaladiisii oo lagu dilay aagga Degmada Jamaame | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Sarkaal Shabaab iyo ilaaladiisii oo lagu dilay aagga Degmada Jamaame
Sarkaal Shabaab iyo ilaaladiisii oo lagu dilay aagga Degmada Jamaame
Xoogaga Kumaandooska Danab ee ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka ayaa hawlgal ay ka sameeyeen aagga Degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose waxay ku dileen Sarkaal ka tirsanaa Ururka Al Shabaab.
Hawlgalka oo ahaa mid lagu burburinayay goobaha ay gabaadka ka dhigtaan mintidiinta Ururka Al Shabaab ayaa laga fuliyay deegaanka Koban, oo hoos-tagga Degmada Jamaame, Shabaabkuna uu ka arrimiyo.
Taliyaha Guutada 16aad ee Ciidanka Kumaandooska Danab, Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa sheegay in hawlgalkan ugu dambeeyay lagu qaarajiyay Cali Garweyne oo Shabaabka u qaabilsanaa dhibaca maaliyadda ee Gobolka Jubbada Hoose iyo afar ka mida ilaaladiisii.
Taliyaha oo u waramay Idaacadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa sidoo kale sheegay in wadada xiriirisa Jamaame iyo Kismaayo, ay ka saareen miinooyin ay ku aaseen Shabaabka, oo ujeedkoodu uu ku sheegay inay ku dhibaateeyaan shacabka.
Waxa uu intaa ku daray in hawlgalka burburinta ee ka socdo Gobolka Jubbada Hoose uu weli socdo, isla-markaana uu yoolku yahay in lagu ciribtiro Shabaabka hubeysan.
Xoogaga Danab oo gadaal ka riixaya Ciidanka Xoogga Dalka iyo Ciidamada Daraawiishta Jubbaland ayaynaan u suurtagelin inay foodda geliyaan Degmada Jamaame, sababo ku aadan wadada oo sida la sheegay ay miinooyin fara-badan ku aasan yihiin.